Home Wararka Gudaha Iidle Yare oo Muqdisho yimid soona saaray war ku saabsan xaaladdiisa iyo...
– Fanaanka Cabdiraxmaan Cabdullahi Nuune (Iidle Yare) oo maalmihii lasoo dhaafay aad loo hadal hayey xaaladiisa caafimaad ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Markii uu soo gaaray Muqdisho wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u istaageen, isagoo si gaar ah ugu mahad celiyey Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye oo la sheegay inay ka dambaysay in Iidle Yare xaaladiisa caafimaad loo raadiyo daryeel dibada ah
Waxaa la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Iidle Yare ayaa gelinkii dambe ee Sabtidii aad ugu baahay baraha bulshada, kadib markii uu qoraal taabtay quluubta Soomaalida uu soo dhigay Facebook
Tan iyo xalay, waxaa Nairobi ka socday dedaallo ay wadeen asxaabta iyo ehelka fannaankaas oo lagu xaqiijinayay badqabkiisa iyo halka uu ku sugan yahay
Sabtidii ayaan guriga ka baxay anigoo aaday cisbitaal. Markaas waxaa i xanuunayay gows. Markii aan cisbitaalka tegay, waxaa la ii sheegay in sokortayda ay kacsan tahay. Waan suuxay qol ayaa la i seexiyay, waxaan soo kacay anigoo moodaya in aan aakhiro joogo. Waxaan is iri waad dhimatay oo ma noolid,”ayuu yiri.
Previous articleDENI IYO XAMAR:Shalay oo uu musharrax ahaa iyo maanta oo uu soo laabtay i
Next articleMaxaa looga hadlay kulanka Rooble iyo Axmed Madobe?